● ခ ရစ် တော် ၏ တ ပည့် တော် တစ် ဦး ရဲ့ လ က္ခ ဏာ ...
“ယေ ရှု က လည်း ငါ့ ကို ချစ် သော သူ သည် ငါ့ စ ကား ကို နား ထောင် လိမ့် မည်။ ငါ့ ခ မည်း တော် သည် ထို သူ ကို ချစ် တော် မူ ၏။ ငါ တို့ သည် လည်း သူ့ ဆီ သို့ ကြွ ၍ နေ ရာ ချ မည်။ ငါ့ ကို မ ချစ် သော သူ သည် ငါ့ စ ကား ကို နား မ ထောင်။ သင် တို့ ကြား ရ သော စ ကား သည် ငါ့ စ ကား မ ဟုတ်၊ ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ သော ခ မည်း တော် ၏ စ ကား ဖြစ် ၏” (ယော ၁၄း ၂၃- ၂၄)။
တစ် ပည့် တော် တစ် ယောက် ဆို တာ က ဘာ လဲ၊- ဦး ဆုံး အ နေ နဲ့ ခ ရစ် တော် ရဲ့ တပည့် တော် တစ် ယောက် မှာ ရှိ နေ ရ မယ့် အ ခြေ အနေ ရယ်၊ တ ခြား သူ တွေ တစ် ပည့် တော် ဖြစ် အောင် လုပ် ဆောင် ခြင်း ရယ်၊ ပို ပြီး တော့ တ ပည့် တော် နဲ့ တူ ညီ လာ ဖို့ နား လိုက် လျှောက် အ သက် ရှင် ခြင်း ဆို တာ တွေ ပေါ့။ ခ ရစ် တော် ရဲ့ တပည့် တော် တစ် ယောက် မှာ အ ဓိ ကျ တဲ့ လ က္ခ ဏာ (၄) မျိုး ရှိ ပါ တယ်။
ပ ထ မ အ ချက် က တော့၊-
တ ပည့် တော် တစ် ယောက် ဆို တာ ခ ရစ် ယာန် ယုံ ကြည် သူ တစ် ယောက် ပဲ လို့ နား လည် စေ ချင် ပါ တယ်။ ခ ရစ် တော် ထံ က သာ ရ နိုင် တဲ့ ၀ိညာဉ် တန် ခိုး ကို ရ ရှိ ခြင်း မ ရှိ ပဲ၊ ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် တဲ့ သူ တစ် ယောက် လည်း မ ဟုတ် ပဲ ၊ ခ ရစ် တော် ရဲ့ သင် ကြား မှု တွေ ကို လိုက် လျှောက် ခံ ယူ ဖို့ ကြိုး စား ပြီး ၊ ခ ရစ် ယာန် အ သက် တာ ပုံ စံ နဲ့ အ သက် ရှင် ဖို့ ကြိုး စား နေ ကြ တဲ့ သူ တွေ အ များ ကြီး ရှိ ပါ တယ်။ ခ ရစ် ယာန် မ ဟုတ် ပဲ ဘယ် လို လုပ် ပြီး ခ ရစ် တော် ရဲ့ တ ပည့် တစ် ယောက် ဖြစ် နိုင် မှာ လဲ၊ သန့် ရှင်း သော ၀ိညာဉ် တော် ရဲ့ တန် ခိုး ကို ကော ဘယ် လို လုပ် ပြီး ရ နိုင် မှာ လဲ။ ဒါ့ အ ပြင် ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ တစ် ဖက် မှာ ရှိ တဲ့ စာ တန် မာ န ရဲ့ အုပ် ချုပ် မှု အောက် မှာ အ သက် ရှင် နေ တဲ့ သူ ဖြစ် လို့ ဘု ရား နဲ့ မိတ် ဆွေ ကော ဖြစ် နိုင် ပါ့ မ လား၊ တ ကယ် တော့ လူ ဟာ စာ တန် ရဲ့ အုပ် ချုပ် ချယ် လှယ် မှု အောက် မှာ အ သက် ရှင် နေ ကြ တဲ့ သူ တွေ ဖြစ် လို့ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ တစ် ဖက် မှာ ရှိ နေ တဲ့ ရန် သူ တွေ လို ပါ ပဲ။ သ မ္မာ ကျမ်း စာ က ကျွန်ုပ် တို့ ဟာ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ တ ဖက် မှာ ရှိ တဲ့ စာ တန် မာ န အုပ် ချုပ် ချယ် လှယ် နေ တဲ့ လော က က မ္ဘာ ကြီး ထဲ မွေး ဖွား အ သက် ရှင် နေ ကြ သူ တွေ ဖြစ် ကြ တယ် လို့ ဆို ထား ပါ တယ် ။
( တ မန် ၂၆း ၁၈)
သင် သည် ယ ခု မြင် ရ သော အ ကြောင်း အ ရာ တို့ နှင့်၊ နောက် မှ ငါ သည် သင့် အား ထင် ရှား လ တံ့ သော အ ကြောင်း အ ရာ တို့ မှာ အ မှု ဆောင် ရွက် သော သူ၊ သက် သေ ခံ သော သူ အ ရာ ၌ သင့် ကို ခန့် ထား စေ ခြင်း ငှါ ငါ သည် သင့် အား ထင် ရှား ၏။ တ ပါး အ မျိုး သား တို့ သည် မှောင် မိုက် မှ အ လင်း သို့ ကူး မြောက် ၍၊ စာ တန် ၏ အာ ဏာ ထဲ မှ ဘု ရား သ ခင့် အ ထံ တော် သို့ ပြောင်း လဲ သော အား ဖြင့် အ ပြစ် လွှတ် ခြင်း ကျေး ဇူး ကို ခံ ရ မည် အ ကြောင်း နှင့်၊ ငါ့ ကို ယုံ ကြည် သော အား ဖြင့် သန့် ရှင်း ခြင်း သို့ ရောက် သော သူ တို့ နှင့် ဆက် ဆံ ၍ အ မွေ ခံ ရ မည် အ ကြောင်း၊ သူ တို့ ၏ မျက် စိ ကို ဖွင့် စေ ခြင်း ငှါ သူ တို့ ဆီ သို့ သင့် ကို ငါ စေ လွှတ် မည် ဟု မိန့် တော် မူ ၏။
ဒီ အ ဟန့် အ တား က လူ သား နဲ့ ဘု ရား သ ခင် အ ကြား မှာ ရှိ နေ တဲ့ အ ပြစ် တ ရား ကြီး ပါ ပဲ။ ခ ရစ် တော် ရဲ့ အ သေ ခံ ခြင်း ဟာ ၊ ဒီ အ ဟန့် အ တား ကြီး ကို ဖယ် ရှား ပေး လိုက် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ခ ရစ် တော် ရဲ့ ကယ် တင် တော် မူ ခြင်း ကို မ ယုံ တဲ့ သူ တစ် ယောက် အ တွက် ၊ ခ ရစ် တော် ရဲ့ တ ပည့် တော် တစ် ယောက် ကို သန့် ရှင်း သော ၀ိညာဉ် တော် က ပေး တဲ့ တန် ခိုး တွေ ကို ဘယ် လို များ ရ ရှိ ခံ စား ဖို့ ဖြစ် နိုင် မှာ လဲ။ သင် ဟာ ခ ရစ် တော် ရဲ့ တပည့် တော် တစ် ယောက် လို အ သက် ရှင် ရပ် တည် နိုင် ဖို့ က၊ သင် ခ ရစ် တော် ကို ယုံ ကြည် လက် ခံ ပြီး ကယ် တင် ခြင်း ရ ရှိ တဲ့ အ ခါ၊ သင့် ဘ ၀ ထဲ ၀င် ရောက် လာ တဲ့ သန့် ရှင်း သော ၀ိညာဉ် တော် ရဲ့ တန် ခိုး စွမ်း အား တွေ လို ပါ တယ်။ ဒါ ကြောင့် တ ပည့် တော် ဖြစ် ချင် ယင် ဦး ဆုံး ခ ရစ် တော် ကို သင့် ရဲ့ ကယ် တင် ရှင် အ ဖြစ် လက် ခံ ယုံ ကြည် ဖို့ က တ ပည့် တော် တစ် ယောက် ဖြစ် ဖို့ အ ခြေ ခံ အ ချက် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဒု တိ ယ အ ချက် က တော့၊-
တ ပည့် တော် တစ် ယောက် မှာ ခ ရစ် တော် နဲ့ အ ပြန် အ လှန် ရင်း နှီး ကျွမ်း ၀င် မှု တစ် နေ့ ထက် တစ် နေ့ တိုး တက် ကြီး ထွား နေ တဲ့ အ နေ အ ထား ရှိ ရ ပါ လိမ့် မယ်။ ဆို လို တာ က၊ အ ယင် တုန်း က ဘု ရား သ ခင် ကို သိ ကျွမ်း ရင်း နှီး ခဲ့ တဲ့ အ နေ အ ထား ထက် ၊ အ ခု သိ ကျွမ်း ရ တဲ့ အ နေ အ ထား က ပို ပြီး သိ ကျွမ်း ရင်း နှီး ရ မယ် လို့ ဆို လို တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ အ ယင် တုန်း က ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ စ ကား တော် ကို နာ ခံ လိုက် လျှောက် တာ ထက် ၊ အ ခု ပို ပြီး နာ ခံ လိုက် လျှောက် တတ် လာ တဲ့ အ နေ အ ထား မျိုး ကို ဆို လို တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ သ တိ ထား ရ မှာ က၊ သင် နဲ့ ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ ရင်း နှီး ကျွမ်း ၀င် တဲ့ အ ခြေ အ နေ ဟာ ၊ တက် လိုက် ကျ လိုက် ဖြစ် တာ မျိုး မ ဟုတ် ပဲ၊ အ ထက် ကို ပဲ တစ် နေ့ ထက် တစ် နေ့ အား နဲ့ အင် နဲ့ ရွေ့ ရှား တိုး တက် နေ တဲ့ (dynamic) အ နေ အ ထား မျိုး ပဲ ဖြစ် ရ ပါ မယ်။ သင့် ကို သင့် မိတ် ဆွေ တစ် ယောက် က သူ့ ရဲ့ အိမ် ထောင် ရေး အ ခြေ အ နေ ကို အ ခု လို မျိုး လာ ပြီး ဖွင့် ဟ ပြော ပြ ခဲ့ ယင် သင် ဘယ် လို ကောက် ချက် ချ မ လဲ “မင်း သိ ပါ တယ် သူ ငယ် ချင် ရာ.. ငါ့ လောက် ငါ့ မိန်း မ အ ပေါ် ရင် နာ ရ တဲ့ သူ ရှိ မှာ မ ဟုတ် ပါ ဘူး ကွာ… မင်း သိ တဲ့ အ တိုင်း ပဲ လေ … ငါ တို့ အ တူ လက် တွဲ ပြီး ဘာ များ လုပ် ခဲ့ ကြ လို့ လဲ … ဟို တုန်း က ဆို .. သူ့ ကို တစ် ခါ တွေ့ လိုက် ယုံ နဲ့ အ ရမ်း ကို ချစ် ရ တယ် .. အ ခု အဲ သ လို မျိုး ငါ လုံး ၀ မ ခံ စား ရ တော့ ဘူး … တ ကယ် ပါ ပဲ.. သူ့ အ နား မှာ နေ ရ တာ ကို က ငါ့ အ တွက် လုံး ၀ ပျော် ရွှင် မှု ကင်း ဝေး သွား သ လို ပဲ” လို့ ပြော လာ ယင် … သင့် အ နေ နဲ့ “အော် … သူ တို့ ရဲ့ အိမ် ထောင် ရေး အ ခြေ အ နေ က တော့ တော် တော် လေး ကို အား နဲ ချိ နဲ့ နေ ပြီ” လို့ သင့် အ နေ နဲ့ ကောက် ချက် ချ မိ ကောင်း ချ မိ မယ် မ ဟုတ် လား။ ဒီ လို ပါ ပဲ၊ ကျွန်ုပ် တို့ နဲ့ ခ ရစ် တော် ရဲ့ (Relationship) ရင်း နှီး ကျွမ်း ၀င် ဆက် ဆံ မှု ဟာ ဆုပ် ယုတ် မှု မ ရှိ ပဲ အ မြဲ တိုး တက် မှု ရှိ နေ ဖို့ လို ပါ တယ်။
တ တိ ယ အ ချက် က တော့၊-
ခ ရစ် တော် ရဲ့ တ ပည့် တော် တစ် ဦး ဟာ ကိုယ့် ဘ ၀ ရဲ့ အ ခြေ အ နေ တိုင်း မှာ ခ ရစ် တော် ရဲ့ စ ကား တော် ကို နာ ခံ လိုက် လျှောက် တဲ့ သူ တွေ ဖြစ် ရ ပါ လိမ့် မယ်။ ခ ရစ် တော် က ဘု ရား သ ခင် ရဲ့ ညွန် ကြား ထား သ မျှ အား လုံး ကို သင် ယူ ဖို့ လေ့ လာ လိုက် လျှောက် ဖို့ ပြော ခဲ့ ပါ တယ်။ တ ပည့် တော် တစ် ယောက် ဟာ ခ ရစ် တော် ရဲ့ ညွန် ကြား တာ တွေ ထဲ က၊ ကိုယ် လို ချင် တာ ကို ပဲ ကောက် ယူ ရွေး ချယ် နာ ခံ လိုက် လျှောက် ရ တဲ့ သူ မျိုး မ ဟုတ် ပါ ဘူး။ ဒါ တော့ လွယ် ကူ လို့ ငါ လုပ် နိုင် တယ်၊ ဒါ က တော့ ခက် လို့ မ လုပ် ဘူး ဆို ပြီး ကိုယ့် စိတ် ကြိုက် အ သက် ရှင် လို့ မ ရ ပါ ဘူး။ ခ ရစ် တော် ရဲ့ တ ပည့် တော် ဆို တာ ခ ရစ် တော် ရဲ့ ညွှန် ကြား သ မျှ အား လုံး ကို တစ် ခု မ ကျန် လေ့ လာ လိုက် လျှောက် လုပ် ဆောင် ရ ပါ မယ်။
“ယေ ရှု က လည်း ငါ့ ကို ချစ် သော သူ သည် ငါ့ စ ကား ကို နား ထောင် လိမ့် မည်။ ငါ့ ခ မည်း တော် သည် ထို သူ ကို ချစ် တော် မူ ၏။ ငါ တို့ သည် လည်း သူ့ ဆီ သို့ ကြွ ၍ နေ ရာ ချ မည်။ ငါ့ ကို မ ချစ် သော သူ သည် ငါ့ စ ကား ကို နား မ ထောင်။ သင် တို့ ကြား ရ သော စ ကား သည် ငါ့ စ ကား မ ဟုတ်၊ ငါ့ ကို စေ လွှတ် တော် မူ သော ခ မည်း တော် ၏ စ ကား ဖြစ် ၏။” (ယော ၁၄း ၂၃- ၂၄)
စ တု တ္ထ အ ချက် က တော့၊-
ခ ရစ် တော် ရဲ့ တ ပည့် တော် ဆို တာ အ ခြား သူ တွေ ကို လည်း တ ပည့် တော် တွေ ဖြစ် အောင် လုပ် ဆောင် ရ ပါ မယ်။ ခ ရစ် တော် ရဲ့ စစ် မှန် တဲ့ တ ပည့် တော် ဖြစ် မယ် ဆို ယင် ၊ ခ ရစ် တော် မိန့် မှာ စေ ခိုင်း တဲ့ “အ ခြား သူ များ ကို တ ပည့် တော် ဖြစ် ဖို့ လုပ် ဆောင် ပါ” ဆို တဲ့ အ ချက် ကို အ လေး ထား ပြီး၊ အ ရေး တ ကြီး လုပ် ဆောင် နေ ဖို့ လို ပါ တယ်။ လူ မျိုး တ ကာ တို့ ကို ငါ့ တ ပည့် ဖြစ် လာ ဖို့ သွား ပြီး လုပ် ဆောင် ပါ ဆို တဲ့ စေ စား ချက် အ တိုင်း ၊ သင် လုပ် ဆောင် တဲ့ အ ရာ မှန် သ မျှ၊ သင် တာ ၀န် ယူ နေ ရ တဲ့ အ ရာ တိုင်း မှာ လူ သား အား လုံး ခ ရစ် တော် ရဲ့ နောက် လိုက် တွေ ဖြစ် လာ ဖို့ လုပ် ဆောင် နေ ရ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ ဘယ် အ ချိန်၊ ဘယ် နေ ရာ၊ ဘယ် လို အ ခြေ အ နေ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ၊ အ ခု ကိုယ် ရောက် နေ တဲ့ အ ချိန် ၊ နေ ရာ၊ အ ခြေ အ နေ တိုင်း ဟာ ဒီ စေ စား ချက် ကို လုပ် ဆောင် ဖို့ ပဲ ဖြစ် တယ် ဆို တာ ကို နား လည် သ ဘော ပေါက် ဖို့ လို ပါ တယ်။
ဒါ့ ကြောင့် ခရစ် တော် ကို ကယ် တင် ပိုင် ရှင် အ ဖြစ် ယုံ ကြည် လက် ခံ သူ တိုင်း၊- ခ ရစ် တော် ထံ ဘ ၀ အ သက် တာ အား လုံး ကို ဆက် ကပ် ၀န် ခံ အပ် နှံ တဲ့ ခ ရစ် ယာန် တွေ ဖြစ် ဖို့၊ ခ ရစ် တော် နဲ့ အ စဉ် တိုး တက် နေ တဲ့ ရင်း နှီး ကျွမ်း ၀င် မှု ရှိ နေ တဲ့ သူ တွေ ဖြစ် ဖို့ ၊ ခ ရစ် တော် ရဲ့ ညွှန် ကြား သ မျှ အား လုံး ကို တစ် သွေ မ တိမ်း နာ ခံ လိုက် လျှောက် တဲ့ သူ တွေ ဖြစ် ဖို့ နဲ့ ကိုယ့် လို ပဲ ခ ရစ် တော် ရဲ့ တ ပည့် တော် သစ် တွေ တိုး ပွား လာ အောင် လုပ် ဆောင် နေ တဲ့ သူ တွေ ဖြစ် ကြ ပါ စို့။ အာ မင် …
Posted by Wunnyin Meeainn at 9:38 AM No comments:
သင့်Emailထည့်ပြီး“ရယူလိုသည်” ဟုနှိပ်ပါ။တင်သမျှပို့စ်အားလုံးသင့်Email ထဲသို့အရောက်ပို့ပေးပါမည်။
Our Audiences From
Copyrignt © 2012 ၊ Published by ၀ိညာဉ်မီးအိမ်(ခရစ်ယာန်စာပေစုစည်းမှု) . Simple theme. Powered by Blogger.